Tsidiho ny Banky Federal Reserve any New York | Vaovao momba ny dia
Tsidiho ny Banky Federal Reserve
Raha te hanana kilasy toekarena tena izy ao anatin'ny adiny iray fotsiny ianao, inona no fomba tsara kokoa noho ny mankany amin'ny iray amin'ireo toerana itantanana ny vola be indrindra eto an-tany: ny Banky Federal Reserve. Ilay any New York no lehibe indrindra amin'ireo banky 12 mandrafitra ity rafitry ny banky any Etazonia ity.
Niasa nanomboka ny volana novambra 1914, ny foiben'ny banky dia ao amin'ny 33 Liberty Street nanomboka ny taona 1928. Tsy isalasalana fa ny toerana malaza indrindra dia ny vault izay namboariny 26 metatra ambanin'ny haavon'ny ranomasina, tao amin'ny vatolampy velona mandrafitra ny nosy Manhattan. Ao amin'io vault io no mitazona ny volamena lehibe indrindra eto an-tany, na dia tsy ofisialy aza ity angona ity fa mihoatra ny azo atao. Ary io no izy, toa saika eto an-tany ny fialofana hafa taonina mahery maherin'ny 5.000 volamena, manodidina ny $ 160 trillion, izay mihoatra na latsaka izay miafina eto.
Ny tsirairay amintsika dia manana fotoana hahafantarana sy hitsidihana ity toerana ity. Afaka manao fampisehoana isika fitsidihana izay, amin'ny teny anglisy, izy ireo dia hanazava aminay ny fomba fiasan'ity rafitra ara-bola sarotra ity ary hahitanay ny Tantaran'ny vola. Boky kely manazava zavatra mitovy na kely kokoa amin'ilay lazain'ny torolàlana amintsika ary misy audiovisual mahaliana kokoa mamita ny fitsidihana ity toerana ity.
Mazava ho azy, Izy ireo koa dia hitety anay amin'ny iray amin'ireo efi-trano feno bara volamenaVoaro tsara tokoa, ary hasehon'izy ireo amintsika ny iray amin'ireo varavarana azo antoka metatra metatra ny savaivony, izay tsy noeritreretinay tamin'ny sary mihetsika fotsiny. Ary izany rehetra izany dia azo atao mora foana. Mila manao fotsiny isika amandriho ny fitsidihanay an-tseraseraao amin'ny Tranonkala ofisialin'ny Banky Federal Reserve.
Handefa mailaka miaraka aminay izy ireo fanasana izay tsy maintsy ataontsika pirinty sy entintsika miaraka amintsika ny andro nanendrena antsika ny fitsidihana, izay andro fiasana foana, teny an-dalana. Ary tsy misy zavatra hafa, satria ny fitsidihana dia tena malalaka Ary, araka ny noresahintsika tetsy ambony dia afaka adiny iray monja isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Etazonia » Tsidiho ny Banky Federal Reserve